Wyndham Hotels & Resorts kupinda Nepal neBhutan, inowedzera muIndia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Wyndham Hotels & Resorts kupinda Nepal neBhutan, inowedzera muIndia
Bhutan Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • India Kupwanya Nhau • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ramada neWyndham Valley Thimpu (Bhutan)
Wyndham Mahotera & Resorts nhasi yakazarura zvirongwa zvekuvhura mahotera ayo ekutanga muNepal neBhutan, nepo ichizivisa kuvhurwa kwazvino kweHawthorn Suites naWyndham Dwarka-yekutanga Hawthorn Suites nehotera yeWyndham kuIndia.
Mahotera ese ari matatu chikamu chekuedza kukuru kwaWyndham kuwedzera zvakanyanya tsoka dzayo kuyambukira Indian subcontinent uye zvinowedzeredzwa nezvimwe zvivakwa mudunhu izvo zvichangovhurwa kana zvakatemerwa kuvhura mumwedzi mipfumbamwe inotevera. Wyndham parizvino ndeimwe yemakambani makuru epahotera epasi rose muIndia.
Nikhil Sharma, director director wenzvimbo, Eurasia, Wyndham Hotels & Resorts vakati, "Mumakore mashoma apfuura, Bhutan neNepal vakaona kuwedzera kwakatsiga mukushanya, zvichivaita nzvimbo dzakanaka kuti isu tiwedzere. Zvakare, ivo vanowirirana zvakakwana mukana uye kukwidziridzwa kwemusika wepakati muIndia, watakasimbisa nhasi nekuunzwa kweHawthorn Suites neWyndham brand. Sezvo Indian subcontinent iri kuramba ichiita masaisai muindasitiri yekugamuchira vaeni, Wyndham inoramba iri laser yakanangana nekupinda mumisika yayo mikuru uye kuzadzikisa basa redu rekuita kuti kufamba kwehotera kugoneke kune vese.
Anouya mahwindo ekuvhura anosanganisira:
Kuisa mucherechedzo kusvika kwaWyndham muBhutan, iyo Ramada® neWyndham Valley Thimpu ichapa makamuri akapamhama makumi mana neshanu, kusanganisira akawanda ane panoramic maonero eakanaka Himalaya. Yakadzika mumupata weThimpu nerwizi rweRaidāk rwunoyerera, nzvimbo yayo ichapa nyore kuwana zviitiko zvakakosha paTasichho Dzong, chifananidzo chikuru cheBuddha Dordenma, uye nenzvimbo inoyera yeChirangaridzo Chorten. Ihotera iri rinotarisirwa kuvhurwa munaKurume 41.
Ramada Encore naWyndham Kathmandu Thamel (Nepal)
Kupinda kwekutanga kwaWyndham muumambo hweHimalaya muNepal, iyo Ramada Encore naWyndham Kathmandu Thamel iri mudunhu reThamel muguta guru reKathmandu, rave riri iro nzvimbo yeindasitiri yevashanyi kweanopfuura makumi mana emakore. Ihotera iyi ichapa makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe makamuri akanakisa emakamuri evaenzi ane huwandu hwenzvimbo dzekuita kuti ugare zvakanaka uye padenga remba uine maonero anoyevedza eguta. Ihotera iri rinotarisirwa kuvhurwa muna Nyamavhuvhu 90.
Ramada naWyndham Mussoorie Mall Road (India)
Ichipararira kune imwe acre yenyika, iyo Ramada naWyndham Mussoorie Mall Road ichapa makamuri makumi mana nemashanu zvese nezvinodiwa zvakakosha kuti vashanyi vafarire nguva yavo. Ihotera iyi ichave iri pane imwe yenzvimbo dzinoyemurika dzemakomo kumaodzanyemba kweIndia, inonziwo Mambokadzi weMakomo, inozivikanwa pakati pezororo pamwe nevashanyi vebhizinesi. Ihotera iri rinotarisirwa kuvhurwa kupera kwemwedzi uno.
Munguva pfupi yapfuura 2020 kuvhura kunosanganisira:
Hawthorn Suites naWyndham Dwarka (India)
Inoratidza kusvika kweHawthorn Suites neWyndham brand muIndia subcontinent, iyo Hawthorn Suites naWyndham Dwarka inzvimbo yeecko-yemweya inopa 202 makamuri akapararira evashanyi uye iri padyo padyo neDwarkadhish Temple, Dwarka Beach uye Gomti Ghat. Iyo chivakwa, yakavhurwa muna Kubvumbi 2020, inopa yakakura mukana wekunze kuwana nemukana wekutarisa pahutano uye kuongorora zvisikwa.
Ramada naWyndham Aligarh GT Road (India)
Ihotera nyowani-yekuvaka iri muAligarh, mudunhu rekumadokero kweUttar Pradesh nyika, iyo Ramada naWyndham Aligarh GT Road yakavhurwa muna Ndira 2020 uye inoratidzira makumi matanhatu emakamuri evaenzi emazuva ano, nzvimbo yakakura yehuswa, uye nzvimbo dzakawanda dzezvinhu. Inowanikwa munzvimbo yakanaka ine nyore kuwana kuAligarh Junction Railway Station uye Aligarh Bus Stand, hotera yacho inogadzira imba huru yekufamba munzvimbo yese.
Ramada Plaza naWyndham Pune Hinejwadi (India)
Yakamiswa padivi pePune Bangalore Highway, ingori awa yekutyaira kubva kune anozivikanwa kupera kwevhiki senge Lonavala, Khandala, uye Lavasa, ndiyo Ramada Plaza naWyndham Pune Hinejwadi. Ihotera, yakavhurwa munaKurume 2020, inogadzira makamuri evashanyi akapamhama zana nemakumi maviri nenomwe uye inopa mukana wekutarisa zvinoshamisira zviri padyo nenzvimbo dzekunze dzakadai seAga Khan Palace.